Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW .KWỌ Ndị na-elekọta bọl Rafa Benitez Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Manager kasị mara aha na aha njirimara; 'Raf'. Rmụaka anyị Rafa Benitez Akụkọ na akwụkwọ akụkọ na-adịghị mma Akụkọ eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Legendary Football Manager na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, Na-amalite.
Akụkọ Rafa Benitez nke nwata - Ndụ mbido:
Rafael Benítez Maudes mụrụ na 16th ụbọchị Eprel 1960 na Madrid, ebe ndị mụrụ ya, Francisco na Rosario, biri ndụ ha niile. O nwere nwanne nwoke nwoke okenye, Francisco Javier, na nwanne nwanyị nke nta, María del Rosario.
Dịka nwatakịrị, Rafa maara otú e si agwakọta ọmụmụ ihe na football. Ọ ka nwere ọtụtụ ezi ncheta oge ya na 'San Buenaventura School' na Madrid, ọkachasị ndị nwere otu egwuregwu bọọlụ.
Rafa ghọrọ ndị na - agba bọọlụ Madrid mgbe ọ dị afọ iri na abụọ.
Rafa Benitez Biography Eziokwu - Imezu Nzube Childhoodmụaka Ya:
N'afọ sochirinụ mgbe ebulichara Ogige Ulo nke Madrid, ọ meriri nrọ nwata nke onye ọ bụla kpere maka ya.
Na 13 afọ, Rafa sonyeere Real Madrid Academy site na asọmpi a na-akpọ 'Egwuregwu'. Site na ebe a, ọ sonyere Castilla U-15, otu ìgwè nke Real Madrid.
Mgbe ọtụtụ afọ nke mgbalị na nraranye ya na Castilla gasịrị, o mechara sonye na Real Madrid U-18 otu ebe ọ kachasị ma merie Spanish Championship.
Rafa Benitez Ndụ Ezinụlọ:
Nna ya bụ onye na-akwado Atlético de Madrid mgbe niile, ebe nne ya na-akwado Real Madrid mgbe niile.
Ọ bụ ezie na ha soro ìgwè ndị na-asọ mpi, nne na nna ahụ ji obi ụtọ na nraranye kwadoro ya mgbe ọ sonyere na Real Madrid dị afọ 13.
Dominic Calvert-Lewin Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ihe Na-adịghị Eke
N'agbanyeghị eziokwu ahụ ọ sonyeere ndị otu egwuregwu ya, nna ya nwere ọmịiko 'akwa na-acha ọcha na akwa' (Atlético).
Rafa Benitez Nwunye:
Mgbe ọ na-arụ ọrụ na 'Abasota Gym' na Madrid, ọ zutere nwunye m Montse. Ha lụrụ na 1998 ma ka dị n'otu.
Ha nwere ụmụ nwanyị abụọ, Claudia na Agata.
Rafa Benitez Untold Biography - Ọ bụghị ihe niile gbasara bọọlụ:
N'oge m bụ nwata, ọ na-enwe ụdị egwuregwu ọ bụla. Ọ ga-egwu egwu egwuregwu na-adịghị agwụ agwụ n'okporo ámá na n'ụlọ akwụkwọ. Ma ọ bụghị football niile; ọ hụkwara basketball, handball, judo na igwu mmiri. ọ na-asọ mpi mgbe niile iji merie.
Ọ mara ezigbo mma mgbe ọ na-aga n'ụlọ. N'oge m oge ọ na-eji egwu egwuregwu dị ka chess ma ọ bụ 'Stratego', egwuregwu dị egwu n'oge ahụ dabere na usoro agha.
Rafa Benitez Mmụta:
N'oge niile ọ na-aga n'ihu, ọ dịghị mgbe Rafa leghaara agụmakwụkwọ ya, nke dị oké mkpa nye ya. Ọ bụ 2000 pesetas (12 euro) nke ọ na-akwụ ụgwọ dị ka ụgwọ site n'ịgba bọl ka a kwụrụ iji kwụọ ụgwọ maka ụgwọ mahadum ya.
Dị ka ọ dị, ọ maara na ọ nọ na Nkụzi Ahụ, nke ọ mụtara na INEF na Madrid.
Ọ na-ejikọta ọmụmụ akwụkwọ mahadum ya na ọrụ m na-arụ. Nke a pụtara oge nke 45 na-agba ọsọ kwa ụbọchị, site na Complutense University campus, ruo na corridors nke Metro, ka ọ rute n'Ebe Ọzụzụ Real Madrid.
O doro anya na ọ dịghị mkpa ka ọ kpoo ọkụ tupu ọzụzụ.
Rafa Benitez Biography Eziokwu - Egwuregwu mahadum na mmerụ ahụ:
Rafa mepụtara site na òtù U-18 gaa na nke atọ nke Real Madrid, Real Madrid Aficionado. Na 1979, mgbe ọ na-egwuri egwu n'ebe ahụ, ọ natara oku iji sonyere National Team University nke National University na-abanye na 'Universiada', asọmpi egwuregwu asọmpi Olympic nke dị n'etiti ụmụ akwụkwọ dị iche iche, na Mexico.
Callum Wilson Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
N'oge asọmpi ahụ, o merụrụ ahụ na-egbu ikpere na enweghị ike igwu egwu ọzọ ruo ọnwa isii. Ọ dịghị mgbe ọ gbakere. Ọ hụrụ ụbọchị na-atụghị anya ya na ọ ga-akwụsị ọrụ ya.
Mgbe mmerụ ahụ gasịrị, Real Madrid zigara ya AD Parla na 3rd Division. Ọ na-egwuri egwu n'ebe ahụ ruo afọ anọ. Agbanyeghị na ha bụ oge dị mma na ndị otu ya nwetara aha Njikọ na nkwalite.
Otú ọ dị, Rafa nọgidere na-enwe nlọghachi nke mmerụ ikpere ya. Ọ hapụrụ Madrid na nke mbụ wee banye maka Linares nke Jaén (2ª División B) ebe ikpere ya gara n'ihu na-enye ya ọtụtụ nsogbu, na-eme ka egwu egwu ya nwee ahụhụ.
N'ikpeazụ, o kpebiri ịkwụsị ọrụ ya dị ka ndị ịgba egwu na mmalite nke 26.
Ndụ mgbe ezumike nká football:
Mgbe ọ na-eleghachi anya ugbu a, Ọ na-enwekarị mmasị na-arụ ọrụ dị ka onye ọkpụkpọ-onye nlekọta ọbụna dị ka ndị ịgba egwu. Ọ dịghị mgbe ọ ghọtara na ezi oku ya na-ezo ezo, na n'oge ọ na-egwu egwu, ọ na-emepe nkà maka ihe ga-abụ ọrụ ya n'ọdịnihu: ịkụzi football.
Rafa Benitez Childhood Akụkọ gbakwunyere Ihe Ndị Na-adịghị Eke Ndụ - ustgha maka Monies:
N'oge ahụ ezumike nká site na bọọlụ, Rafa hụrụ na ọ rụghị ego iji biri naanị bọọlụ.
Ozugbo ọ gụsịrị akwụkwọ m, ọ ghọrọ onye nkụzi PE n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ dị na Madrid na mgbe e mesịrị na ụlọ akwụkwọ sekọndrị na Linares.
Mgbe ọ laghachiri Madrid, ọ rụrụ ọrụ afọ ise dịka onye nchịkwa teknụzụ na gyms dị iche iche ma rụọkwa ọrụ dị ka onye nchịkwa na Real Madrid Academy.
Rafa Benitez Childhood Story Plus Na-agbaghaghị akụkọ ndụ Eziokwu - Ọrụ Nlekọta:
N'oge Luis Molowny bụ onye isi nchịkwa nke Real Madrid, Ramón Martínez bụ Onye isi oche nke Football na Vicente Del Bosque bụ Nkà na ụzụ nchịkwa nke Football; Rafa ghọrọ onye nchịkwa nke Real Madrid U-19. Ya na otu egwuregwu a, ọ meriri okpukpu abụọ nke Cup na nchịkọta aha n'ogo atọ. O yiri ka n'ikpeazụ, ọ na-aga n'ihu n'ịzụ ọrụ.
Ihe ndị ọ rụzuru na U-19 dugara ya na njikwa Castilla CF na ngalaba 2. Ka oge na-aga, ọ ghọrọ onye enyemaka na Vicente Del Bosque na ndị otu mbụ.
Dị ka onye na-eto eto na-eto eto nke na-enwetụbeghị onye ọkpụkpọ, ọ ga-erute oche otu dị ka onye inyeaka mgbe Real Madrid nọ na-atụ anya inweta. O kpebiri ịga n'ihu wee buru ụzọ nke aka ya, hapụ ụlọ 'ọcha'.
Ezigbo Valladolid abanyela na ngalaba nke abụọ. Ha họọrọ ya ka o nyere ha aka inwete ịbanye n'ọkwa kacha elu. Ọ bụ nnukwu nsogbu na ohere nye ya n'ọkwa ọkachamara.
Rafa Benitez Biography - Iwuli ntọala ahụ:
N'oge oge gara aga na Real Valladolid, o wuru otu egwuregwu na ndị ntorobịa si 'ya' Castilla, dịka Marcos, Antía, Santamaría na Fernando. O nwere ndi agha siri ike ndi siri ike iji nwee obi ike ihu ihe obula na ngalaba nke abuo.
N'oge na-adịghị anya tupu asọmpi ahụ amalite, e nyere ìgwè abụọ si 'La Liga' ntaramahụhụ site na ịda mba na-akwụzighị ụgwọ ha. Real Valladolid bụ otu n'ime ìgwè ndị ahọpụtara iji weghara ọnọdụ ha ohere ma bulie ya 'La Liga'.
N'ịbụ onye a na - akwalite 'La Liga', naanị ụbọchị 15 ga - aga n'ihu mmalite nke oge na sistem dị njikere igwu egwu n'òtù dị ala karị, ndị ọrụ ya enweghị ohere imeghachi omume.
Ndị otu ahụ na-egwuri egwu ma o doro anya na ha adịghị njikere ịlụ ọgụ na 'La Liga'. Ha chọrọ oge, nkwadebe na ahụmahụ. Ndị nduzi malitere ịma jijiji ma kpebie na a chọrọ mgbanwe nke nchịkwa. Nke a bụ mgbe ọ gbara àmà mbụ ya dị ka onye nchịkwa football.
Oge na-eso ya sonyere Atlético Osasuna (Pamplona) wee chee nsogbu ndị yiri ya ihu. Ebumnuche gbanwere na nkeji oge gara aga, Rafa tụrụ anya inweta nkwalite na 'La Liga', a na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, onye ọ bụla na-atụ ụjọ ma na mberede, a na-ewere ya dịka 'nwata na enweghị uche'.
N’agbanyeghi n’otu ọgbọ na ogo ahụ ọ mara dịka ọ bụ mgbe e goro ya; klọb ahụ kpebiri, na izu nke itoolu, na ọ gaghị adabara mkpa ha.
Ọ bụ ezie na oge siri ike, Rafa ekweghị ya. O kpebisiri ike karịa mgbe ọ bụla iji gosipụta ihe ọ pụrụ ime.
Rafa Benitez Eze Nkwalite:
Achọrọ m isonyere otu ndị ga-enwe okwukwe na ya wee hapụ m ka m rụọ ọrụ. Na Almendralejo (Badajoz), Extremadura FC nyere ya ohere ahụ ma mee ka ha kwalite 'La Liga'. Ọ bụ nzọụkwụ ọzọ n'ihu ndị niile na-arụ ọrụ siri ike.
Ihe ịma aka m ọzọ bụ otu ìgwè nke abụọ nke na-ele anya na nkwalite, Tenerife. N'agbanyeghi na oge ahu bu ihe siri ike mgbe edere ya na nkeji nke abuo, ha kwalitere 'La Liga' n'egwuregwu egwu na Leganes. Daalụkwa Rafa ọzọ.
Rafa Benitez Biography Eziokwu - Nkọwa Mbụ Nke Mbụ:
Mgbe emechara nke ọma site na ịkwalite ndị otu na La Liga, 'ndị na-eto eto na ndị na-enweghị uche' Rafa nwere nnukwu ahụmịhe kachasị elu na Valencia nyere ya 'nnukwu nkwekọrịta' mbụ ya.
Mgbe afọ 31 na-enweghị mmeri, o duuru ha ka ha buru aha Njikọ ahụ gaa n'obodo Turia River. Agbanyeghi na oge nke abụọ ahụghị trophi, a kwụghachiri anyị ụgwọ oge nke atọ jupụtara na ha: Njikọ Njikọ ọzọ na iko UEFA.
N'oge ahụ, Njikọ Spanish nọ na elu ya. Oge ndị ahụ bụ ụbọchị 'Galácticos' nke Real Madrid, nnukwu Barcelona, ​​akụkọ ifo 'SuperDepor', Atlético Madrid siri ike na Sevilla dị ike.
Ha niile bụ ndị asọmpi a ma ama na-emeghị ka egwuregwu ahụ dị mfe maka Rafa. Ma, ọzọkwa, ịrụsi ọrụ ike ya nyere ya ihe ndị ọ tụrụ anya ya.
Rafa Benitez Bio - Ndụ na Liverpool:
Mgbe ihe ọ kpọrọ oge ikpeazụ ya na Valencia, Rafa kpebiri iwere ọtụtụ nsogbu ndị ọhụrụ, gụnyere ihe ịma aka nke ịnye ọzụzụ na mba ọzọ.
Achingnye ọzụzụ na Premier League abụrụla nrọ mgbe ọ bụla, ya mere, mgbe ohere dapụtara ịbanye na Liverpool FC, ọ wụlitere na ohere ahụ.
Mgbe Rafa bịanyere aka na Liverpool na June 2004, ọ dị mpako ịghọ onye nkụzi Spanish mbụ na asọmpi Britain. Nke a bụ mmalite nke ọtụtụ oku 'Lovehụnanya Rafa na Liverpool'.
N'oge ya na Anfield, o meriri utu aha anọ dị mkpa gụnyere abalị anwansi ahụ na Istanbul, nke hụrụ asọmpi Champions League bịara Merseyside.
Ọ bịarutere na njedebe atọ wee merie ebe nke abụọ n'ọsọ nke Premier League na isi 86, akụkọ ihe mere eme maka ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe 6 oge dị ebube, ọ ghaghị ịhapụ Liverpool maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Ndụ aghaghị ịga n'ihu. Ya mere, na June 2010, ọ kwakọba akpa m ma hapụ Ịtali ịghọ onye nchịkwa nke Inter Milan.
Rafa Benitez Biography Eziokwu - Ndụ na Inter Milan:
N'ime ọnwa ise zuru oke nke ijikwa Inter, Rafa meriri Super Cup na Ikuku World Cup nke FIFA.
N'agbanyeghị ihe ịga nke ọma a, ọ bụghị ezughị oke ndị na-adịghị akwado ya site na mmalite.
Ha ruru nkwekọrịta iji kwụsị nkwekọrịta Rafa n'isi ụtụtụ na ka ya na ha pụọ.
Mgbe ahụmahụ Rafa na Milan gasịrị, ọ laghachiri Merseyside (Liverpool) iji biri ebe ahụ. N'ebe ahụ, Rafa malitere 'The Montse Benítez Charitable Foundation' ya na nwunye ya. Ejiri ntọala ahụ iji nyere aka zụlite ego iji ketaara ndị ọrụ ebere dị iche iche na Merseyside na Wirral.
Na September 2011, Rafa nwere nnọọ obi ụtọ ka e nye ya Golden Club Crest site Valencia; nke onye isi oche, Manuel Llorente, nyere ya n'ihu egwuregwu ahụ megide Barcelona na Mestalla.
Rafa Benitez Bio - Ọkachamara Nkà na ụzụ Football:
Rafa na-achọkarị ụzọ isi jikọta nkà na ụzụ n'ime egwuregwu site n'ụbọchị ọ bụla nke ọrụ ịkụzi ya. Mgbe ọ ka na-eche nnukwu onyinye, ọ na-ewepụta oge ya iji zụlite nkà na ụzụ nke ọ kpọrọ 'Onye nchịkwa Globall'.
Nkà na ụzụ a nyere aka na mmepe nke usoro football na njikwa otu. Emere onye nkuzi Globall na eburu ndị nkuzi ọkachamara wee wepụta ya na February 2012.
O jikwa ohere ahụ dee akwụkwọ nke ya n'oge ahụ. Akwụkwọ Rafa, 'Njikọ Njikọ Njikọ ' wepụtara na September 2012. Chelsea FC hụrụ ya n'anya wee kpọọ ya. Nke a hụrụ nlọghachi ọrụ ya.
Rafa Benitez Biography Eziokwu - Ndụ na Chelsea FC:
Rafa sonyeere Chelsea na November 2012 wee soro ndị otu ahụ rụọ ọrụ siri ike ịkụnye ụkpụrụ kachasị elu na ịma aka maka nsọpụrụ.
Taa, ọ na-enwe obi ụtọ maka mmachi onwe onye na nke ọkachamara nke ijikwa otu mmeri na UEFA Europa Njikọ Ikpeazụ na Amsterdam na May 15th.
Ọ na-enwekwa obi ụtọ na ọ meriri ebumnuche nke ịchekwa ọnọdụ na UEFA Champions League otu egwuregwu bọọlụ maka Chelsea FC na imecha na nke atọ nke Premier League.
N'agbanyeghị ihe ọ rụzuru, ndị na-akwado Chelsea kpọrọ ya asị ma gosi ụdị ọkọlọtọ niile chọrọ ka ọ pụọ.
Nke a bụ n'ihi na ọ napụrụ ha nke ukwuu mgbe ọ bụ Liverpool Manager. Rafa kpebisiri ike ịhapụ ha mgbe ha kpọrọ asị.
Rafa Benitez Biography Eziokwu - Ndụ na Napoli:
Site na 1st July 2013 ruo June 2015, Rafa na-elekọta SSC Napoli. Ọ meriri abụọ ọzọ trophies na ndepụta ya nke ọma. N'oge mbụ ya, o meriri Fiorentina (3-1) n'ikpeazụ nke Copa Italia na stadium Olympic na Rom.
Ogologo oge ikpeazụ, ọ meriri Jọshụa Super Cup na-egbu Juventus (5-6 na ahụhụ mgbe 2 2 bịarutere Doha, Qatar).
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ mgbe ọ hapụsịrị Real Madrid dị ka onye ọkpụkpọ na onye nchịkwa, klọb ọ kpọrọ ụlọ maka afọ 17 - A họpụtara ya ka ọ bụrụ onye nchịkwa egwuregwu mbụ nke Real Madrid CF na June 2015.
Ọnwa asaa ka nke ahụ gasịrị, a manyere ya ịhapụ ọgbakọ klọb nke dị ya ezigbo mkpa. Ekele maka Real Madrid ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Rafa Benitez Bio - Backlaghachi na Business Nkwalite:
Na March 2016, Rafa malitere oru ohuru ohuru na ijikwa Newcastle United FC Nloghachi ya na Premier League mgbe afọ atọ nke ịzụ mba ọzọ ga-abụ ihe ịma aka dị mkpa. Oge a ka ọ laghachiri na azụmahịa ya ochie.
Nke ahụ bụ 'Iwuli ntọala nke ga - eme ka nloghachi nke Newcastle United FC laghachi n'ọkwa dị elu nke Premier League'. Nke a bụ ebe kwesịrị ekwesị maka ụlọ ọrụ Bekee a. Rafa meriri nke a ma gosiputa na enweghi obi abua.
Ihe ezumike ha kwuru bụ akụkọ ihe mere eme…
Nwunye Rafa Benitez na okwu Jose Mourinho - Akụkọ Na-adịghị Agbanwe:
Nwunye Rafa Benitez amawo njakịrị n'otu oge na di ya ejirila ọrụ ya na-ehichapụ ihe fọdụrụnụ Jose Mourinho.
E kwuru nke a mgbe Real Madrid họpụtara di ya. Ọ na-abakwa mgbe a hụrụ Benitez ka ọ na-elekọta ọrụ nke atọ nke Mourinho na-achịbu.
Jose Mourinho's Fued na Nwunye Rafa Benitez.
José Mourinho zigara nwunye Rafa Benitez azịza na-agbawa obi mgbe o kwuchara na mgbe ahụ, di Real Madrid bụ "na-edozi nsogbu ya" mgbe niile.
Onye-isi-isi nke Chelsea kụrụ azụ sị: “Ọ bụrụ na ọ na-elekọta nri di ya, ọ gaghị enwe ohere ikwu okwu banyere m.”